Lampard oo sharaxaad ka bixiyay sababta ka dambeysay guuldarradii Chelsea ka soo gaartay Arsenal kulankii xalay ee Finalka FA Cup-ka – Gool FM
Dajiye August 2, 2020
(London) 02 Agoosto 2020. Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa muujiyay sida uu kaga murugeysan yahay guuldarradii xalay ka soo gaartay naadiga Arsenal kulankii Finalka ahaa ee tartanka FA Cup-ka.
Arsenal ayaa ugu dambeyntii xalay ku guuleysatay koobka FA Cup-ka markeedii 14-aad ee taariikhda, kaddib markii ay guul kaga gaartay Kooxda Chelsea 2-1, kulan aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka caalamiga ah ee Wembley.
Frank Lampard ayaa wareysi uu ku bixiyay ciyaarta kaddib warbaahinta wuxuu ku muujiyay sida kaga xun yahay guuldarrada ay kala kulmeen kooxda Arsenal, wuxuuna yiri:
“Si fiican uma ciyaarin si aan u guuleysano finalka, taasina waa waxa aan dooneyno inaan horumar ka sameyno”.
“Waxay aheyd inaan sida ugu fiican u ciyaarno, balse waxaan la kulanay dhaawacyo qaar, iyo karaka roosaha oo aanan u qalmin”.
“Waxaan xakameynay ciyaarta 10-kii daqiiqo ugu horreeyay ee aan ku dhalinay goolka, kaddibna waxaan u ciyaarnay si tartiib ah, waana arrinta ka caawisay inay soo laabtaan isla markaana ay badelaan qaabkii ay ciyaarta ku socotay”.